कोभिडको नयाँ संस्करण पहिलेको भन्दा कति खतरनाक ?
मुख्य पृष्ठविदेश स्वास्थ्यकोभिडको नयाँ संस्करण पहिलेको भन्दा कति खतरनाक ?
विराटनगर/कोभिड १९ को नयाँ संस्करण पुरानोभन्दा बढी सङ्क्रामक रहेको एक अध्ययनले पत्ता लगाएको छ ।
अध्ययनले पत्ता लगाएअनुसार भाइरसमा नयाँ प्रजनन नम्बर वा आर नम्बर ०.४ देखि ०.७ सम्म बढेको छ । यो अनुमान गरिएको छ कि बेलायतमा देखिएको नयाँ भाइरसको आर नम्बर १.१ देखि १.३ बीच रहेको छ । यदि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कम गर्नका लागि आर नम्बर १.० भन्दा तल ल्याउन जरुरी हुन्छ ।
आर नम्बरले एक सङ्क्रमित व्यक्तिले औसतमा कति व्यक्तिलाई सङ्क्रमित गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । यसको मतलब, भाइरस सङ्क्रामक भई फैलिने क्षमता कत्तिको छ भनेर आर नम्बरले पत्ता लगाइन्छ । यदि यो सङ्ख्या एकभन्दा बढी भएमा, महामारी बढ्ने बताइन्छ । रोकथामका लागि कुनै कदम नचालेमा कोरोना भाइरसको आर नम्बर तीनको नजिक छ ।
भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने, अस्पतालमा भर्ना हुने वा भाइरसका कारण मर्ने व्यक्तिको सङ्ख्यालाई आर नम्बर निकाल्न प्रयोग गरी भाइरस फैलाउने क्षमताको अनुमान लगाइन्छ । एकभन्दा बढी आर नम्बर भएमा एक सङ्क्रमित व्यक्तिले कम्तिमा एक व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलाउन सक्छ । तर, आर नम्बर एकभन्दा कम भएमा कुनै पनि व्यक्तिमा सङ्क्रमण नसर्ने हुँदा भाइरसको प्रसार रोक्न सकिन्छ ।
लन्डनको इम्पिरियल कलेजका प्राध्यापक एक्सेल गान्डीका अनुसार पुरानो भाइरस र हाल देखिएको भाइरसको बीचमा धेरै फरक छ । यो नयाँ किसिमको भाइरस सजिलै फैलिन सक्छ जुन सबैभन्दा गम्भीर परिवर्तन हो । उनले सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले भाइरसको नयाँ प्रकार बालबालिकालगायत सबै उमेरका मानिसहरूमा फैलन सक्ने देखिएको बताएका छन् ।
इम्पिरियल कलेजको अध्ययनले नोभेम्बरमा बेलायतमा नयाँ प्रकारको सङ्क्रमण तीन गुणा बढेको र अघिल्लो भेरियन्टको सङ्क्रमण एक तिहाइमा झरेको देखाएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जिम नैस्मिथ जबसम्म भाइरसको रोकथामका लागि केही फरक गरिँदैन, नयाँ प्रकारका भाइरस फैलिन जारी रहने, धेरै सङ्क्रमित थपिने, धेरै व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना हुने र बढी मृत्यु हुने बताउँछन् ।
त्यस्तै, वारविक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लरेन्स योङका अनुसार सुरुका सङ्केतले हाल वितरण भइरहेका तथा विकास गरिएका खोप नयाँ भाइरसमा समेत प्रभावकारी हुने भनेर देखाएको छ ।